बोल्नै नसक्ने भए डा. केसी - Setokalam.com
२०७६ मंशिर २९
बोल्नै नसक्ने भए डा. केसी
काठमाडौं : उनी आँखा चिम्लेर पल्टिरहन्छन्। कोही भेट्न आउँदा पुलुक्क हेर्छन्। गल्दै गएपछि फेरि आँखा बन्द गर्छन्। आगन्तुकहरु हेरेरै फर्किन्छन्। २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुमा समस्या बढ्दै गएको छ। उनको दुई पटक एन्जियोग्राम गरिसकिएको छ। उको शरीर कमजोर बन्दै गएको छ। बोलीसमेत निस्किँदैन। मुस्किलले साउती गर्छन्। परेला पाट्टिएका छन्। तर, ६३ वर्षीय केसीले औषधी खान मानेका छैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सुरु गरेको विरोध कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
रिले अनशन बसेका चिकित्सकविरुद्ध सोमबार दिउँसो केही व्यक्ति मुठभेडमा उत्रिन थालेपछि प्रहरी संख्या बढाइएको छ।
चिकित्सकहरु अनशनमा बसेपनि शिक्षण अस्पताल आएका बिरामीले सेवा पाइरहेका छन्। सोमबार १५ सय बिरामीले ओपीडी टिकट काटेर उपचार गराएका थिए। आइतबार एक हजार चार सय ९९ जनाले सेवा लिएका थिए। कार्यकारी निर्देशक खड्गाले सेवा प्रभावित नभएको बताए। उनले भने, ‘बिरामी घटेका छैनन्। उपचार पाइनँ भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छैन।’
विराटनगर । प्रदेश सरकारले भोली बिहीबार सार्वजनिक...
भोजपुरमा तेस्रो मेयरकप प्रतियोगिता सुरु
भोजपुर । भोजपुरमा तेस्रो मेयरकप प्रतियोगिता सुरु...
भोजपुरमा दुई वडा कार्यालमा अज्ञात समुहद्धरा आगजनी हुदा ४८ लाख बरावरको क्षती
भोजपुरमा दुई वडा कार्यालमा अज्ञात समुहद्धरा आगजनी...
सिंहदरबार नफापेका सिंहहरु
भगवान श्रीरामको राज्याभिषेक समारोह भइरहेको थियो ।...
भोजपुरमा दुई वडा कार्यालमा अज्ञात समुहद्धरा आगजनी पछि यस्ताे देिखयाे (फोटो फिचर)
भोजपुर । भोजपुरमा दुई वडा कार्यालमा अज्ञात...
भोजपुरमा ६५ प्रतिशत घरको पुनः निर्माण सम्पन्न, पहिलो किस्ता लिने म्याद थप
भोजपुर । भोजपुरमा भुकम्पबाट क्षति भएका ६५ दशमलव...
भोजपुरमा दुई वडा कार्यालमा अज्ञात समुहद्धरा आगजनी, घटनाको विवरण आउदै